उपत्यकाका पसलमा गुणस्तरहीन मासु – newsagro.com
उपत्यकाका पसलमा गुणस्तरहीन मासु
January 17, 2014 January 19, 2014 NewsAgro0Comments
काठमाडौं , ३ पुस \_ उपत्यकाका मासुपसल तथा तिनबाट बिक्री हुने मासु गुणस्तरहीन पाइएको छ। उपत्यकाका अधिकांश मासुपसल दुर्गन्धित भेटिएका छन्। साथै मासु काट्ने कामदारको लुगा मैलो, सरसफाइसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको, पशुपन्छी खुलारूपमा काटेर बिक्रीवितरण गरेको र मासु काट्दा प्रयोग गरिने पानी पनि फोहोर भेटिएको छ।
भेटनरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा. मुकुल उपाध्यायले अधिकांश पसलको मासु खान नै नहुने अवस्थाको भएको बताए। उनले भने, ‘३० वटा मासुपसलको अनुगमन गर्दा दुईवटामा मात्रै खान हुने मासु भेटियो।’ कार्यालयले माछा, कुखुरा, खसी, राँगा र बंगुर वधशाला तथा पसलको अनुगमन गरेको थियो। यस्ता पसलमध्ये कुनैले पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ ले निर्दिष्ट गरेका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
कार्यालयले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर र ठिमी नगरपालिकाका मासुपसलको अनुगमन गरेको हो। कार्यालयले माछा, कुखुरा, खसी, राँगा र बंगुर वधशाला तथा मासुपसलको अनुगमन गरेको थियो। यस्ता पसलमध्ये कुनैले पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसारका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
उपाध्यायका अनुसार यस्ता पसलको मासु प्रयोगका कारण सबैभन्दा बढी १२ वर्षसम्मका बालबालिका, गर्भवती महिला र ६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई ठूलो असर पुग्ने गरेको छ। क्षयरोग र एचआईभी एड्स लागेका बिरामीलाई समेत असर पर्ने उनले बताए।
‘बिरामी, बालबालिका, गर्भवती महिला तथा वृद्धवृद्धामा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै कम हुने भएकाले यस्ता मासुको प्रयोगले ज्यान जाने सम्भावनासमेत हुन्छ’, उनले भने। दूषित मासुमा पाइने इकोलाई र कोलाइफर्मलगायतका कीटाणुका कारण पखाला, टाइफाइडजस्ता समस्या देखा पर्न सक्ने उनले बताए।
काठमाडौंको बालाजुस्थित अनिशा शाही, रामकृष्ण खड्गी, श्रवणकुमार गुप्ता, कृष्णबहादुर शाही र गणेश उप्रेतीको पसल अनुगमन गरिएको थियो। यसैगरी हाइजेनिक मिट सप्लायर्स पनि अनुगमनको दायरामा परेको थियो। अनुगमनका क्रममा हाइजेनिकबाहेक सबै पसल तथा त्यस्ता पसलका मासु गुणस्तरहीन फेला पारिएको थियो।
भक्तपुरका रामकृष्ण शाही, सुरेश शाही, रत्नप्रसाद दवाडी, दिनेश लोला, विक्रम छवालको पसल तथा सूर्यविनायक मिट सपको अनुगमन गरिएको थियो। यसमध्ये सूर्यविनायकको मासुमात्रै स्वास्थ्यवर्द्धक भेटिएको थियो।
ठिमीका ६, ललितपुरका तीन, जाउलाखेलका दुई र कीर्तिपुरका पाँचवटै पसलको मासु गुणस्तरहीन फेला पारेको कार्यालयले जनाएको छ। अनुगमनको क्रममा अधिकांशले दर्ता नगरी पसल सञ्चालनमा ल्याइएको पाइएको छ। दर्ता नभएका पसलको मासु खाएर बिरामी पर्दा कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ।
पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयका निर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीका अनुसार उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार संकलित मासुको नमुनामध्ये ११.४ प्रतिशतमा साल्मोनेल्ला जीवाणु र ८० प्रतिशत नमुनामा कोलाईफर्म तथा इकोलाई भेटिएको छ। अर्को अध्ययनअनुसार कुल नमुनामध्ये ४०.२ प्रतिशतमा साल्मोनेल्ला भेटिएको थियो। अध्ययनअनुसार विगत १० वर्षमा देखिएको मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशत पशुपन्छीबाट सर्दै आएको छ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनले पशु वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पशुलाई उपयुक्त वधशालामा वा वधशाला नभएको अवस्थामा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा काट्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरेको छ। रोग लागेर वा कालगतिले मरेका पशुको मासु र छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
← दूधबाट तीन अर्बभन्दा बढी आम्दानी
तोडियो संक्रान्तिमा चरा मार्ने चलन →